Qof "af duubtay" diyaarad Dubai u socotay oo toogasho lagu dilay - BBC News Somali
Qof "af duubtay" diyaarad Dubai u socotay oo toogasho lagu dilay
Ciimadda qalabka sida ayaa isku gadaamay sidaadii ay diyaaraddu u caga dhigatay Chittagong
Rahaf al-Qunun oo Canada ka degtay
"Waxaan isku daynay in aan xirno oo uu is dhiibo, balse wuu diiday markaas ka dib ayaana tooganay," ayuu yiri Sareeye Gaas Motiur Rahman.
"Bangladesh ayuu u dhashay waxaana ka helnay bistoolad aan wax kale wehelin." ayuu intaas ku sii daray.
Laamaha ammaanka ee Bangladesh
Wararkii hore ayaa sheegay in qofka laga shakisan yahay uu dhimirka ka xanuunsan yahay uuna dalbaday in uu la hadlo Ra'iisulwasaare Sheikh Hasina oo booqasho ku maraysa magaalo xeebeedka Chittagong.
Sawirro baraha bulshada la soo dhigay ayaa muujinaya dad badan oo taagan garoonka iyo diyaarad nooceedu tahay Boeing 737-800 oo gadaashooda ka muuqata.
Qorshihii hore ayaa ahaa in duulimaadkaasi uu Axadda ka dago Dubai iyadoo diyaaraddu ay ka duushay Dhaka.